उताको हेरेपछि के आउँछ उत्तर ? – समावेशी
मंगलबार, कार्तिक १३, २०७५ | २:४५:३५ |
– कौशल चेम्जोङ –
‘यो युरोप लाजलाग्दो छ’ भन्दै केही महिनाअघि स्पेनको बार्सिलोनामा छुट्टै राज्य क्याटालान कारलस पुइग्डेमोन्टको निम्ति हजारौं मान्छे उभिए । तर, स्पेनिस सरकारले पृथकतावादी नेतालाई प्रश्रय दिएन । हामीले पनि क्याटालानका नारालाई साथ दिएनौं । अनि कश्मिरका पत्थरवाजको पक्षमा मानवअधिकारको ढ्वाङ फुकेनौं । प्रस्ट छ, हामी पञ्चशील नीतिको पक्षधर हौं, अरूको आन्तरिक विवादमा घुसपैठ गरी उधुम मच्चाउने कुनै चाहना हुँदैन र त हामी शान्तिप्रिय छौं । तर, किन केही युरोपियन हामीलाई गिजोल्न खोज्छन् ? आफ्नो मर्यादा बिर्सेर सिके राउतहरूको पक्षमा उभिन्छन् ? आफूलाई बेल्जियन भन्नेहरु फ्लान्डरको पक्षमा कसरी उभिएलान् ? यस्ता आन्दोलनको पक्षमा नउठ्ने हात कसरी नेपाल टुक््रयाउनुपर्छ भन्ने सिके राउतको पक्षमा उठ्न सक्छ ? पत्यार गर्न गाह्रो पर्छ ।